Izingane Ukuqapha Software | Qapha i-Kids Kids / Teen's Mobile Phone, Amathebulethi & IPads
I-TheOneSpy - I-New Edge ye-Spy Experience!
QAPHELA IZINGANE ZAKHO ZIQHELEKILE NJENGOBA ZIQALA - BE QAPHELA KWEZOKHUSELEKILE 24 / 7
Kunzima ukugcina izingane zingenazo zonke izikhathi - futhi futhi zihlulekile kubo, futhi, njengoba izingane namuhla zidinga ukuphuma nje, hhayi nje kuphela esikoleni, kodwa futhi ukuba zihlangane, futhi: zihambele amaqembu okuzalwa, imisebenzi yesikole, imicimbi yezemidlalo, konke izinhlobo zezinto. Lesi sidingo esiqhubekayo sokuphuma senza kube nzima kakhulu kubazali ukuqinisekisa ukuthi izingane zabo zilungile. Kodwa nge-TheOneSpy isofthiwe yezinhloli zeselula ezungezile, awudingi ukukhathazeka futhi.
Yiba nomntanakho 24 / 7 - kuqinisekisiwe
Njengoba izinga lobugebengu emadolobheni likhuphuka, abazali bacabanga zonke izinhlobo zezinto ezimbi ezingase zenzeke ezinganeni zabo uma ziphuma. Ukugqekeza nokuthumba emigwaqweni, ukuxhashazwa nokuhlukunyezwa esikoleni, nokuwela enkampanini engafanele emacimbini kuyizinto ezimbalwa abazali abacabanga ngazo lapho bevumela izingane zabo ukuba zihambe endlini. Lezi yizona zinkinga ezinkulu kakhulu, yingakho umzali othintekayo nomthwalo odingayo udinga i-Kids Monitoring Software. Uma usuthole le software yeselula yocingo kumakhalekhukhwini wengane yakho, ukukhathazeka kwakho kuphelile njalo.
Ukwesaba kwengane yakho ewela enkampanini engalungile?
Njengoba nje inkampani enhle ingaba nemiphumela emihle ezinganeni, inkampani embi ingonakalisa ngisho nokuhamba phambili kwayo. Ukubhema, ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kanye nemisebenzi yobugebengu kuyizinto ezimbalwa nje ezinkampani ezimbi ezingangenisa ingane yakho. Noma yimuphi umzali onomthwalo wemfanelo angathanda ukugcina iso elibukhali ezinganeni zabo, ikakhulukazi uma behamba emaphathini noma nabangani ebusuku. Ngakho thola i-TheOneSpy App emafonini abo manje futhi uqale ukuvikela ingane yakho enkampanini embi.
Yiba nomntanakho emigwaqweni
Lesi yisici esihlosiwe esihlosiwe
Thepha izingcingo zomakhalekhukhwini wabo, zilalele, zithinte, noma zirekhode. Yazi umnxebi nomamukeli wekholi ngayinye, isikhathi eside kangakanani ikholi ngayinye ehlala, futhi uma kwenzeka.
Hlola imininingwane yabo yoxhumana nabo befoni, kufaka phakathi inombolo yabo yeselula, inombolo ye-landline, ikheli leposi, ikheli le-imeyili kanye nemininingwane yephrofayela yezokuxhumana.
Bheka izithombe ezigcinwe efonini yabo - labo abazifake efonini yabo, zitholwe kusuka kwenye idivayisi noma zilandiwe kusuka ku-Intanethi. Isitembu sosuku nosuku ngalunye kufinyeleleka kuwe.
Ungashintsha phakathi kwanoma iyiphi inamba yamadivayisi ngelayisensi eyodwa, futhi ungathinteki kunoma iyiphi idatha yedivayisi. Qaphela, ulalele izingcingo zabo noma ulandele indawo yabo ngesikhathi esifanayo, futhi.
Hlola idivayisi noma amadivaysi abo kunoma ikuphi ibanga elinikeziwe, kungakhathaliseki ukuthi likhulu noma lincane kangakanani. I-TheneneSpy iqinisekisa ukuthi noma ngabe ikuphi emhlabeni, ayisoze ngaphesheya kwebala lakho lokuqapha.
Lalela Umsindo Okuzungezile Imisindo Phila noma Ubhale
Lalela umlayezo wakho we-iPhone wezithombe ezizungezile ngokusebenzisa imakrofoni yawo, noma ngisho nokurekhoda imisindo bukhoma, ngokusebenzisa ideshibhodi yakho yeTheOneSpy.
Finyelela kubhokisi lokungenayo lemibuzo bese ufunda yonke imicu, ugcwalise isitembu sesikhathi nesikhathi somlayezo ngamunye, ubunikazi bomthumeli noma abamukelayo kanye nenombolo yabo yefoni.
Buka amabhukhimakhi abo
Akupheli ekubukeni umlando wakho wesiphequluli sefoni yakho, ungahlola ngokuqhubekayo ukuhlola ukuthi yimaphi amakhasi abawabeke uphawu noma afake ohlwini lokufunda lwe-Safari yabo.
Hlola imiyalezo yabo yombhalo we-Cell Phone ngokufunda yonke imicu ye-SMS, ukwazi ukuthi ungubani nomthumeli kanye nomamukeli wombhalo ngamunye, futhi uhlola usuku nosuku isitembu sombhalo ngamunye.
Vula isigaba sabo sekhalenda nezikhumbuzo, futhi uthole ukuthi yini ehlelwe usuku ngalunye. Thola ukuthi ubani obeke ama-aphoyintimenti nokuthi ubani.
Thola ukuthi yikuphi lapho bekhona emhlabeni ngokusebenzisa uhlelo lwe-Global Position System olwenza amandla umkhondo wethu wendawo. Zilandele nxazonke endleleni yazo futhi ulandele indlela yazo.
Ungashintsha ilayisense yakho phakathi kwamapulatifomu ahlukahlukene noma izinhlelo zokusebenza, kumathebulethi noma kumafoni ngaphandle kokuthenga ilayisensi entsha yedivaysi ngayinye. NgeTheOneSpy, akudingeki ukhokhe ngaphezulu.
Imiyalo ye-SMS edelelekile
Isivivinyo sakho sokuqapha esikude asipheli lapho, ungathumela imiyalo kudivayisi yakho nge-SMS. Ungathumela imiyalo ukuqala noma ukumisa noma iyiphi uhlelo lokusebenza, ume isikhashana noma yikuphi uhlelo lokusebenza, noma usebenzise imakrofoni ye-iPhone
Finyelela ama-imeyili abo
Finyelela futhi uqaphe ikheli le-imeyli: buka ama-imeyili abathumele noma awatholile, umamukeli noma umthumeli wabo kanye nesitembu nesikhathi nesikhathi se-imeyili ngayinye.
Finyelela kumlando wabo wesiphequluli
Vula i-Safari yabo futhi babuke noma yiliphi ikhasi lewebhu abaye bafinyelela, lapho belifinyelele, futhi bathole noma yini abayenzile ngaleyo URL ethile.
I-TheneneSpy iphinde inikeze isici sokuqapha imiyalezo yePIN ongayibona ngayo imiyalezo ye-PIN ethunyelwe futhi eyamukelwe. Lesi sici sabantu kuphela abasebenzelana nabanikazi be-BlackBerry futhi atholakala ngeTheOneSpy's BlackBerry App.
Uma ingane yakho ihamba esikoleni, indawo yokudlala noma yokuzivocavoca, futhi ukhathazekile ngokuphepha kwabo emigwaqweni, iTheOneSpy yikho konke okudingayo ukuba ube nabo ngisho nalapho bodwa futhi behamba. Ungasebenzisa isici semikrofoni yeTheOneSpy ukuze ulalele okuzungezile kwengane yakho futhi ungenza ngokushesha uma uzwa okuthile okungahambi kahle.
Ukwesaba kwengane yakho ewela enkampanini engalungile? Ngakho Zama Manje